ESI EWEPU MGBASA OZI NA NDỊ AHỊA MMIRI - UTORRENT - 2019
Gbanyụọ mgbasa ozi na mmemme uTorrent
Ọnụnọ nke mgbasa ozi agbakwunyere na mmemme dịgasị iche iche na-ewute ọtụtụ mmadụ. Na mgbakwunye, ọ na-ewe ebe a pụrụ iji mee ihe, ma dọpụ uche. Nanị ọnụnọ nke mgbasa ozi bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwụghachi azụ nke onye ahịa kachasị ewu ewu na ụwa n'Ọsọ. Ngwaahịa a na-ejikọta arụmọrụ na ngwa ngwa, ma ihe ndị e wuru n'ime ya bụ ụdị ofufe na mmanu. Ka anyị chọpụta ma ị nwere ike wepu mgbasa ozi dị na uTorrent, na otu esi eme ya.
Download usoro uTorrent
Mgbasa ozi na uTorrent
A na-ekewa ngwa ngwa ahụ dị ka adware. Ndị a bụ ihe ngwọta n'efu, ụdị ịkwụ ụgwọ, maka iji nke a bụ nlele nke mgbasa ozi. Ọ bụ ụtụ si na nke a bụ nke mejupụtara akụkụ dị mkpa nke uru nke ụlọ ọrụ BitTorrent, nke nwe gịTorrent.
Gbanyụọ mgbasa ozi
Ma, ọ bụghị onye ọrụ ọ bụla maara na e nwere ụzọ dị mfe na n'ụzọ ziri ezi iji gbanyụọ mgbasa ozi na ngwa uTorrent.
Mepee ngalaba ntọala.
Gaa na ngalaba "Di elu." Tupu anyị egosiputa windo na usoro mmemme zoro ezo. Na mpaghara ndị ahụ, uru nke ị na-amaghị, ọ ka mma ọ bụghị ịnwale ọ bụla, ebe ọ bụ na ị nwere ike ime ka ngwa ahụ ghara ịdị mfe. Ma, anyị maara ihe anyị chọrọ ime na nke a.
Anyị na-achọ "offer.left_rail_offer_enabled" na "sponsored_torrent_offer_enabled" sụgharịrị, ndị na-ahụ maka n'akụkụ na mgbasa ozi mgbasa ozi elu. Ka ịchọta data a ngwa ngwa na ụyọkọ nke ndị ọzọ, ị nwere ike iji ọrụ nchịkọta site na ịpị ya ọnụahịa zuru oke "offer_enabled".
Gbanwee ụkpụrụ nke paragraf a kapịrị ọnụ si "eziokwu" ("Ee") gaa "ụgha" ("Ee"), ma pịa bọtịnụ "OK".
N'otu aka ahụ, anyị na-eme ihe dị mkpa "gui.show_plus_upsell", wee malitegharịa usoro ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbe e meghachisịrị ngwa ahụ, mgbasa ozi na uTorrent lara.
Lee kwa: mmemme maka ibudata iyi
Ọ bụrụ na ị maara ụzọ aghụghọ nke ngwa ahụ, ịkwụsị mgbasa ozi na uTorrent abụghị ihe siri ike, mana onye ọrụ na-enweghị ike iji nkà na ụzụ kọmputa ọkara enweghi ike ịchọta onwe ya na ntọala ndị a.